In ka badan 10 suxufi oo maanta tabbabarka Muqdisho looga furey – Radio Muqdisho
Aqoor kororsigan oo ay soo qaban qaabisay Wasaarada Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska ee xukuumadda Soomaaliya ayaa ah wajigigiisi sedexaad ee loo qabto warbaahinada dowlada federaalka dowlad goboleedyada koonfur galbeed iyo Jubaland kaas oo mudadad uu socdo lagu baran doono sidda loo mideyn karo wada shaqeynta warbaahinta iyo u adeegida bulshada, tabinta macluumaadka arrimaha doorashooyinka iyo ka shaqeynta wararka ammaanka wadanka la xariira.
Steve Turner oo ah la-taliye sarre oo dhanka warbaahinta ah hadda ka mid ah macalimiinta casharadda ka bixiya tababarka ayaa sheegtay in u jeedka uu yahay kor u qaadista xirfadaha warbaahineyd ee wariyeyaasha ka shaqeeya warbaahinta dowladda tan federaalka iyo dowlad goboleedyada.
Cabdiraxmaan Yuusuf Sheikh (Al-Cadaala) agaasimaha guud ee wasaarada warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ayaa sheegey iney muhiim tahay wadda shaqeynta warbaahinada dowlada federaalka iyo dowlad goboleedyada.
“Waxaan u aragtaa runtii wasaaradda warfaafinta ahaan tabbabarkan in uu yahay mid faa’ido weyn u leh warfaafinta wadanka, hadda waxaad ogtihiin in wada shaqeyn wanaagsan ka dhexeyso wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada, waxaan yeelanaa shirar joogto ah insha’alah dhowaan kuwo kale ayaa jiri doono,” ayuu sheegay agaasimaha.
Agaasimaha guud, ayaa sidoo kale xusay in qorshaha uu yahay wada shaqeyn guud oo dhexmarta warbaahinta dowlad goboleedyada tan federaalka si kor loogu qaado fariinta saxda ah ee xambaarsan danaha qaranka isla markaana bulshada wacyigeliyo.
Aqoon kororsigan, ayaa waxaa ka qeybgalaya 12 suxufi oo ka kala socda warbaahinta dowlad goboleedyada; Koofur Galbeed, Jubaland iyo wasaaradda warfaafinta Soomaaliya, waxaana horey loogu qabtay magaalooyinka Baydhabo iyo Kismaayo.